October 7, 2021 - Babal Khabar
Oct72021 by बबाल खबरNo Comments
कसिलो जिन्स लगाएर ब्वायफ्रेण्डसँग डेटमा गएकी युवती आइसीयुमा भर्ना ! कारण यस्तो चकित पार्ने !
पुरा खबर अघि यो भिडियो। एक २५ वर्षकी युवतीले कसिलो जिन्स शर्टका कारण आफू कसरी समस्यामा परिन् भन्ने बताएकी छिन् । धेरै कसिलो डेनिम शर्ट लगाएका कारण ती युवतीलाई निकै खतरनाक स,’क्रमण भएको थियो । उनको अवस्था यतिसम्म ग,’म्भीर भइसकेको थियो कि उनलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो । अस्पतालमा पनि उनलाई आइसीयुमा सार्नुपरेको थियो ।यी अमेरिकी युवतीले सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो समस्याबारे बताएकी छिन् । डेलीमेलको रिपोर्टअनुसार यी युवतीको नाम साम हो । उनी नर्थ क्यारोलिनामा बस्छिन् । उनले आफ्नो टिकटकमा भिडियो शेयर गरेकी छिन् । उनले शेयर गरेको भिडियो ८० लाखभन्दा धेरै हेरिएको छ । यो भिडियोमा उनले कसरी कसिलो जिन्स शर्टका कारण उनलाई घा,’तक छालाको संक्रमण भयो भन्ने बताएकी छिन् । सामका अनुसार उनी ३ वर्ष पहिले ब्वा,’यफ्रेण्डसँग डेटमा गएकी थिइन् । यस क्रममा उनले ब्वा,’यफ्रेण्डको इच्छाअनुसार जिन्स शर्ट
पुरा खबर, पुष्ट अधर, कोमल छाला, स्वस्थ आँखा, चमक भएको केश अनि कसिलो मांसपेसी भएकी महिलालाई आक’र्षक मानिन्छ। त्यस्तै विकसित स्त’न पनि महिलाको शा’रीरिक आक’र्षणको मापदण्डमा पर्छ। विक’सित स्त’नले भा’वी सन्तानको पोष’णको सुनिश्चिततालाई सं’केत गर्छ। त्यसैले जैविक रूपमा पु’रुषहरू थाहा पाएर वा नपाई वि’कसित अर्थात् ठूला स्त’नप्रति र त्यस्तो स्त’न भएकी महि’लाप्रति आ’कषिर्त हुन्छन् जसले गर्दा उक्त महिलाबाट जन्मने आफ्ना सन्तान बाँच्ने सम्भा’वना बढी होस्। भिडियो अचेल शरीरचाहिँ अति पातलो तर स्त’नचाहिँ ठूलो हुनुपर्ने अ’पेक्षा गरिन्छ। छापा, चलचित्र वा टेलिभिजनमा देखिएका कतिपय कुराको सत्यता विचार नगरी त्यसकै पछाडि लाग्नु हुँदैन। भा’ग्यवश स्त’न खुला राख्नु नपर्ने अङ्ग भएकाले यसको उभारलाई शल्यक्रिया नै नग’री बढी भएजस्तो देखाउन सकिन्छ। आफ्नो थु’नचोली (ब्रा-) भित्र कपडा, कपास वा यस्तै कुनै वस्तुक
याै”न सम्पर्कपछि गर्नै नहुने सात काम !
पुरा खबर, यौ”न मानव जीवनको अनिवार्य र प्राकृतिक कुरा हो। यसमा एक अर्का प्रति प्रेम, समर्पण र सन्तुष्टिको महत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ। यौ”न स”म्पर्क गरिरहेका बेला एक अर्कालाई भरपूर सन्तु’ष्टि दिन महिला अथवा पुरुष दुवैले धेरै मेहनत गरिरहेका हुन सक्छन्। यौ”न सम्पर्कका दौ'रान अप'नाइको तरीकाले स'न्तुष्टि पनि देला। तर, यौ”न सम्पर्क गरेलगत्तै तपाईंको पार्टनर पढ्न बस्नुभयो भने तपाईंलाई कस्तो महसुस होला ? स'हवा'सपछि गरिने यस्तै गल्तीहरु, जुन तपाईंले गल्ती गरेको महसुस नगरे पनि यसले तपाईंको पूरै यौ'न जीव'नलाई नै नका'रात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। सुति हाल्नु :– धेरैजसो जोडीहरु यी समस्या'हरुबाट ग्र'सित छन्। से”क्सपछि धेरै जोडी'हरुको पार्टनर निदाइ'हाल्ने बानी हुन्छ, जसले गर्दा यौ”न सम्ब'न्धको मुड नै ख'राब हुन्छ। सुतिहाल्ने बानीले गर्दा यौ”नका क्रममा अपनाइएका तरीकालाई तपाईंले एक अर्कासँग साट्न पाउनु
पुरा खबर, तपाईले हात हेर्ने ज्योतिषको भविष्यवाणीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? कतिले विश्वास गर्दैनन् होला तर यहाँ एक जना पुरुषको भने ज्योतिषले गरेको भविष्यवाणीकै कारण घरवार भताभुंग भएको छ । ज्योतिषले अझै राम्रो श्रीमान पाउँछेस् भनेकै आधारमा श्रीमतीले घर छोडेर हिडिन् भन्दै श्रीमानले आरोप लगाएका छन् । उनी नेपाली मुलका भारतीय नागरिक हुन् । आफ्नो नाम नारायण थापा बताउने उनी नेपाली युवतीको प्रेममा परे । उनले आफ्ना बुवा आमालाई पनि मैले नेपालकी युवती मन पराए अब उनैसंग विवाह गर्छु भनेर सुनाए । तर उनी नेपाल आएर अलपत्र परेका छन् । श्रीमती हराएपछि पनि पर्खाइमै नेपालमै बसेका छन् । यो घटना सुर्खेतको भेरीगंगा १२ छिन्चुमा भएको हो । भारतमा नेपाली युवती (पुष्पा बादी) संग विवाह गरे । उनी अब नेपालमै बस्ने भनेर पुष्पाकै साथ लागेर सुर्खेत आए । सुर्खेतमै उनले आफ्नो पैसा खर्च गरेर पुष्पाको नाममै घर बनाए
‘भू’त’ को डरले बार्दलीमै सुत्छन यि मान्छेहरू ! कारण यस्तो अचम्मको छ
पुरा खबर, आफ्नो घरमा भू'त आएको भन्दै एउटा फ्रेन्च परिवार बार्दलीमा सानो टेन्ट लगाएर सुत्दै आएको छ । एक महिनादेखि उनीहरु यसरी नै सुतिरहेका छन् । गत सेप्टेम्बरमा आफ्ना दुई बच्चाहरुसहित पेट्रिसिया र डेभिड सी फ्रान्सको रेपलोङ्सस्थित अपार्टमेन्टमा सरेका थिए । पेट्रिसियाका अनुसार यस घरमा सर्नासाथ उनकी छोरीले अनौठा कुराहरु देख्न थालेकी थिइन् । र, केही समयपछि यो अपार्टमेन्टभित्र केही असामा'न्य गति'विधि भइरहेको छ भन्नेमा पुरै परि'वार वि'श्वस्त भयो । अवस्था अति ख'राब भएपछि उनीहरुले चैनको नि'न्द्रा पूरा गर्नका लागि बार्द'लीमा टेन्ट लगाए । र, एक महिनादेखि उनीहरु यसरी नै बसिरहेका छन् । ‘पहिले का'लो छा'याँ देखिन्थ्यो’ यो दम्पत्तीले फ्रान्सेली पत्रिका ले प्रोग्रेससँग भनेको छ, ‘त्यसपछि आवा'ज ठूलो हुन थाल्यो । बेला बेलामा बत्ती आफैं जा'न्थ्यो, टिभी आफैं खुल्थ्यो । बिना का'रण फोन आफैं ब'न्
१८ वर्ष अघि भएको थियो एकदमै अनौठो विवाह ! के थियो त्यस्तो जान्नुस
पुरा खबर, तपाईंले डेस्टिनेसन वेडिङ, क्रुज वेडिङलगायत विभिन्न तरिकाले गरिने विवाहको बारेमा पक्कै सुन्नु भएको होला । तर, आजको दिन एक अनौठो विवाहको लागि सम्झिने गरिन्छ । सन् २००३ को अगस्त १० का दिन रुसका अन्तरिक्ष यात्री यूरी मालेन्चेङ्कोले इन्टरनेशनल स्पेस स्टेसनमा विवाह गरेका थिए । यस्तो गर्ने उनी विश्वकै पहिलो व्यक्ति हुन् । सन् १९६२ अप्रिल १२ का दिन रुसका यूरी गागरिन अन्तरिक्षमा कदम राख्ने विश्वको पहिलो व्यक्ति बनेका थिए । गागरिनको यस उपलब्धिको वर्षगाँ'ठमा सन् २००३ मा एक पार्टी राखिएको थियो । त्यहीँ नै अन्तरिक्ष यात्री यूरी मालेन्चेङ्कोले अन्तिम पटक आफ्नी प्रेमिका कटरिना दमित्रिएवलाई भटेका थिए । अप्रिल २००३ मा रुसको एक्सपी'डिसन–७ मिसन लञ्च गरिएको थियो । यस मिसनमा एडवर्ड लूका साथ मालेन्चेङ्को अन्तरिक्षमा गए । यस पूरा मि'सनको क'मान्ड उनकै हातमा थियो । यो मिसन अगस्तको पहिलो हप
जहाँ बेहुलाको साथीहरुले उतार्छन् बेहुलीको कपडा ! त्यति मात्र नभर्इ यस्तो सम्म गरिन्छ
पहिले यो तलको भिडियो हेर्नुस, संसारमा अलग–अलग खाले रीतिरिवाज र परम्परा हुन्छन् । चीनको एउटा परम्पराले पनि तपाईलाई चकित पार्नसक्छ । यहाँ विवाहपछि बेहुलाका साथीहरुले बेहुलीलाई आफ्नो काँधमा राखेर उठाउँछन् । त्यसपछि बेहुलीको कपडा उतार्छन् । तर, दुलहाले यसको विरो'ध गर्दैनन् । बरु, दुलहीका साथीहरुले ती केटाहरूलाई रो'क्ने कोसिस गर्छन् । यदी दुलहाका साथीहरु दुलहीको कपडा उता'र्न सफल भए भने दुलहा पक्षले जितेको मानिन्छ । यदी, दुलहीका साथीहरु आफ्नी साथीलाई बचाउन सफल भए भने दुलही पक्षले जितेको मानिन्छ । यतिमात्रै होइन, विवाहको खेल खेल्ने नाममा नवविवाहित जोडीले कम्बलमा पल्टने र सु'हाग'रातको अभिनय गर्नुपर्ने हुन्छ । पाहुनाहरूले दुलहीलाई कि'स गर्ने, स्ट्रि'प गर्ने, उनको शरी'र'मा स्याही वा यस्तै केही कुराहरु फ्याँ'किदिने, उनको कपडा ता'निदिने लगायत परम्परा समेत छ । विश्वभर यस परम्पराको वि